Efitra lehibe iray izay azo lazaina ho lehibe indrindra amin'ny Aprico.Seza 1477 no miparitaka amin'ny toerana malalaka voahodidin'ny hafanan'ny hazo.
Azonao atao ny mahatsapa ny fanoloran-tena amin'ny feo voatsinjara hatraiza hatraiza, ao anatin'izany ny taratra acoustic mpandehandeha izay mampita ny feon'ny feo mivantana amin'ireo sezan'ny mpihaino.
Alohan'ny lampihazo: ambain-damba "Hiran'i Shinki" nataon'i Ryuko Kawabata
Dingana avy amin'ny mpijery: Miala amin'ny feon-tsofina
Sleeves, misy litera
Seza mpijery ankapobeny: Avy amin'ny lafiny an-tsehatra
(Mampiasa proscenium azo ovaina)
Tanana tsara 10m
Tanana ambany 12m Taratra fitaterana feo
Proscenium azo ovaina
mandatsaka ambainy *
Opera lamba *
Làlana voninkazo vonjimaika
Sehatra Noh vonjimaika
* Tsy azo ampiasaina rehefa mampiasa taratra.
Boriborintany mihamaivana 3kw x 344 boribory ho an'ny sehatra
Boriborintany 6kw x 12 ho an'ny seza, boriborintany 3kw x 4
Fampandrenesana jiro (Panasonic Pacolith Shoot) Preset fader 120ch
Fahatsiarovana an-tsehatra 3 2,000 an-tsehatra XNUMX-dingana XNUMX
(Maimaimpoana rehefa ampiasaina ho jiro fiasana, saingy voahazona rehefa ampiasaina ho jiro amin'ny sehatra) 3 andalana
hazavana valindrihana 2 andalana
Jiro fampiatoana (karazana tetezana) 4 andalana
Jiro Proscenium 2 andalana
Topitra momba ny maraina 1 napetraka
Hazavana ambony hazavana Horizont Laharana 1 andalana 1
Jiro amin'ny tongotra Fitaovana 8 x 5 loko
Jiro eo anoloana Jiro 60w 12 / boriboritany 3 14
(Azo ampiasaina rehefa mampiasa ny horita)
Fanamarihana afovoany afovoany
(Takiana ny mpampiasa iray hampiasana azy.) 2kw xenon x 4
Mobile mixer (YAMAHA CL-3) ◇ fidirana: Monaural 64ch
◇ Fivoahana: afangaroy ny bus 24
mikrô tsy misy tariby 800MHz (tarika matetika B) x 6ch
Fitaovana mikrô mihantona 3-teboka
Mpandahateny andry lafiny (L / R)
Mpandahateny amin'ny rindrina
Latabatra fandraisana 6
Latabatra lava 12
Vata fampahalalana 3 (haben'ny A4, habe B9, sns.)
Efijery telo telo
Sarintany amin'ny faritra fandraisana
kitiho eto raha hisintona
Ireo seza 14 amin'ny laharana faha-2, 11-10, dia nesorina tamin'ny seza misy kodiarana.
Tompon'andraikitra amin'ny fametrahana sy famerenana ireo seza ny mpikarakara. (4 minitra eo ho eo vao miasa ny olona 20.)
Rehefa mametraka mpandahateny vonjimaika dia mety tsy ho azo ampiasaina intsony ny seza misy ny mpanatrika.
Mitandrema azafady rehefa manao seza voatokana.
Ny fidirana amin'ireo seza be mpijery amin'ny efitrano lehibe dia amin'ny rihana faha-XNUMX.Azafady apetraka amin'ny rihana faha-XNUMX ny fandraisana.
Mametaka loop manja (*) ao amin'ny efitrano lehibe.
Mba hampiasana ny loop magnet dia mila ireo fitaovana enti-peo mifatotra ianao.
Raha ianao no mpikarakara izay te hampiasa azy dia miangavy mialoha mba hampihatra.
* Rafitra fanohanana mihaino mba hampitana amin'ny fomba mahomby ny feo eny an-tsehatra amin'ny mpanjifa
Maraina (9: 00-12: 00)
Tolakandro (13: 00-17: 00)
Alin'ny alina (18: 00-22: 00)
Tontolo andro (9: 00-22: 00)
Efitra lehibe: Stage ihany
Efitra fisoloana akanjo manokana voalohany
Efitra fisoloana akanjo voalohany
Saripika an-tsehatra / mpihaino
Drafitra an-tsehatra lehibe
Fiampitana amin'ny ankapobeny amin'ny efitrano lehibe
Sarin'ny mpanatrika efitrano lehibe
Momba ny efitrano fisoloana akanjo, efitranon'ny mpiasa sns.
Ankoatry ny efitrano fiambenana valo misy karama, ny efitrano lehibe dia misy efitrano fandraisam-bahiny, biraon'ny efitra fisoloana akanjo, efitrano fiandrasana mpikarakara, efitrano fandroana ho an'ireo mpanao fampisehoana, efitrano fandriana, efitrano ho an'ny ankizy ho an'ny sekolin-jaza, ary efitrano fanampiana voalohany.
For detailsFampahalalana momba ny efitrano fisoloana akanjo lehibe Jereo azafady
Efitra fisoloana akanjo voalohany (rihana voalohany amin'ny voalohany)
Efitra fisoloana akanjo faha-1 (rihana voalohany amin'ny rihana voalohany)
MAP efitrano lehibe
Drafitra amin'ny efitrano / fitafiana
Biraon'ny efitra fisoloana akanjo
Efitra ho an'ny mpiasa